Kaviri mapuraneti musanganisi akapatsanurwa kuita geared mota, chifukidziro, mutakuri wepasi, agitator, rusvingo rwakatsvaira, bhaketi, mbiri-ikholamu hydraulic kusimudza system, vhuvhu system uye furemu. Icho chitsva uye chepamusoro-chinobatika chinosanganisa chishandiso chakagadzirwa pahwaro hwekuzeya uye hwekumesa epamberi matekinoroji kumba nekune dzimwe nyika.
Kana mutakuri wepasi achitenderera, inotyaira miseve mitatu inomutsa uye inopararira mubhokisi kuti itenderedze akabatana dhiramu ichitenderera nekumhanyisa, kuitira kuti zvinhu zviiswe mukuveura kwakasimba uye kukanya kuzadzisa chinangwa chekupararira kuzere uye kusanganisa; pane chinotsveta papuraneti chinotakura Iyo banga remadziro rinotenderera neiye anotakura nyika, uye inoenderera ichikwenenzverwa kumadziro edhiramu kugadzira rusvingo rwebhari rusina zvinhu uye kugadzirisa musanganiswa. Iyo yakareba yenguva yekusanganisa inodzorwa nemushandisi zvinoenderana nemidziyo yechinhu uye inogona kugadziriswa kuburikidza neanodzora pani. Iyo yekuvhara uye yemapuraneti musanganisi anosimudzwa uye anoderedzwa nekaviri-ikholamu hydraulic kumanikidza, uye iko kushanda kwakagadzikana, nekukurumidza uye kwakareruka.
Ichi chishandiso chinogona kushanda chisina chinhu uye chinogona kuenderera nekuburitsa mvura nezvimwe zvigadzirwa. Naizvozvo, inogona kushandiswa seketuru yegasi. Izvo zvinoshandiswa zvinogona kupisa kana kutonhodzwa nemafuta uye kutenderera kwemvura sezvazvinodiwa; kudziyisa chiutsi kunogona zvakare kushandiswa. Iyo yekudziya tembiricha inoratidzwa neanopisa tembiricha controller pane inodzora pani.
Mapuraneti anokonzeresa anosanganisira yekukurudzira mota kutapurirana, inoparadzira mota, yemapuraneti giya bhokisi, inomutsa, inoparadzira vhiri, kudhirowa strickle, tembiricha sensor tsvimbo, yemagetsi rack, furemu, kumusoro / pasi sisitimu, yekutsiva system, hita.
1. Inokurudzira System
Bhokisi repasi repasi rine simba nemotokari kutenderera kutenderera pakati penzvimbo yemudziyo (Chimurenga).
1.1. Zvokurukisa zviviri zvinotenderera pane zvoga axis zvichitevera shanduko yemapuraneti giya bhokisi, izvo zvinhu zvinokanganiswa neanomutsa kuti aumbe kutambanudza, kusvina, kucheka, kumonyanisa, kuve kwakabatanidzwa zvachose.
1.2. Kuparadzira vhiri rinotyairwa nemota yaro pachinenge ichiteedzera shanduko yemapuraneti giya bhokisi, kupararira, kucheka, kusanganisa solid-mvura, mvura-mvura, solid-solid state zvinhu, kusanganisa nekumutsa kusvika kune chinangwa chekusanganisa.
1.3. Iyo yekudhirowa strickle iri zvakare kutevera iyo shanduko yekutarisa iyo tembiricha tembiricha.
Iyo chaiyo chisimbiso dhizaini inogona kuchengetedza -0.1Mpa vacuum, kusangana nezvinodiwa zvekudzikisa mvura uye kuita debubbling.
3. Kuchenesa uye Kutonhora Sisitimu
Idzi sarudzo dzinogona kuve tsika inoitwa kusangana akasiyana maitiro.
4. Kumusoro / Pasi system
Iyo hydraulic system ine huchokwadi hwakavimbika.
Zvadaro: Vacuum Emulsifying chisanganiso